တရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းရေး ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် G7 အား တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
လန်ချန်း-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် "ရွှေရောင်စံပြ" ဖန်တီးပေးကြောင်း ဝမ်ရိပြော
ASEAN Politics, Law & Military မြန်မာ-ENG
ASEAN Politics, Law & Military မြန်မာ-中文
သမ္မတရှီ၏ ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်က "တစ်နိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုး”လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကို အားကောင်းသောမြှင့်တင်မှုဖြစ်သည်ဟု ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းအား တွေ့ရစဉ်
ပေကျင်း ၊ မေ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက G7 အဖွဲ့အား တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ သွားပုပ်လေလွင့် စွပ်စွဲနေခြင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေခြင်းအား ရပ်တန့်ရန် မေ ၁၆ ရက်တွင် တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကျောက်လိကျန်းက နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု၌ ဟောင်ကောင် ၊ ရှင်းကျန်း ၊ လူ့အခွင့်အရေးများ ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ကိစ္စရပ်များ ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်း အခြေအနေ ၊ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးတို့အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်သည့် ကိစ္စအမျိုးမျိုးပါဝင်သည့် G7 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အစည်းအဝေးက ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်အပေါ် မှတ်ချက်ပေးရန် မေးမြန်းမှုအား ထိုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဟောင်ကောင် ၊ ရှင်းကျန်း နဲ့ ထိုင်ဝမ် အပြင် ပင်လယ်ရေကြောင်း ကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ သဘောထားရပ်တည်ချက်က တစ်သမတ်တည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ကျောက်လိကျန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် G7 ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးအား ပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်‌ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ရှည်လျားတဲ့ G7 ကြေညာချက်က မှားတယ်လို့ ချေပဖို့တောင် မတန်တဲ့ ယုတ္တိမရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကျင့်ရိုးထုံးတမ်းဖြစ်တဲ့ သဘောထားရပ်တည်ချက် နဲ့ ရည်မှန်းချက် အဖြစ်မှန်တွေကို လုံးဝဥဿုံဥပေက္ခာပြုပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ အလွန်အကျွံဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အသရေပျက်အောင် လုပ်ကြံ ပြောဆိုနေပြီးတော့ သွားပုပ်လေလွင့် စွပ်စွဲနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခလိုမျိုး မူမမှန်သော အကြောင်းပြချက်တွေကို သုံးပြီး တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် ထပ်ပြီးတော့ ဖိအားပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ကျောက်လိကျန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် G7 အား ၎င်းတို့၏ အဓိကအချက်အချာ ကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာစနစ် ၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအပေါ် အခြေပြုသည့် နိုင်ငံတကာမူ နှင့် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ နှင့် အခြေခံမူများအပေါ် အခြေပြုသည့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၏ အခြေခံစံနှုန်းများအား ထိန်းသိမ်းရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောက်လိကျန်းက G7 အား မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေခြင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအား သွားပုပ်လေလွင့် စွပ်စွဲနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုကို လေးစားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ G7 ကို ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုးစီးပွားတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ၊ စံနှုန်းနှစ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် စံနှုန်းပေါင်းစုံ ကျင့်သုံးနေတာကို ရပ်တန့်ဖို့ ၊ အလှည့်အပြောင်းတိုင်းမှာ အစွမ်းတွေကို ပြသဖို့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ တံခါးဝတွေအထိ စစ်လေယာဉ် ၊ သင်္ဘောတွေ ပို့လွှတ်တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအမျိုးမျိုးကို လက်လွတ်စပယ် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ၊ တရားမဝင် ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်တံရှည်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ထင်ရာမြင်ရာအားကိုးအားထားပြုနေတာကို ရပ်တန့်ဖို့ ပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလိမ်အညာတွေနဲ့ ကောလာဟလတွေ လုပ်ကြံပြောဆိုနေတာတွေ ၊ ဖြန့်ကြက်နေတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
G7 အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ရှိမှုကို လက်ခံရန် ၊ ထိုက်သင့်သောနိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားများအား ဖြည့်ဆည်းပြီး စစ်မှန်သော နိုင်ငံစုံဝါဒကို ကာကွယ်ရန် ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ ကုလသမဂ္ဂ ၊ G20 နှင့် အခြား ဘက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော ယန္တရားများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားကောင်းလာစေရန် ၊ ကမ္ဘာကြီးအား ပရမ်းပတာ ဖြစ်စေသည့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှု နှင့် ကွဲပြားမှုများ ဖန်တီးပြီး “ဂိုဏ်းငယ်” အုပ်စုနိုင်ငံရေး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကာ စစ်အေးခတ် စိတ်ဓာတ်များ နှင့် အတွေး အမြင် သဘောတရားများဖြင့် ဘက်လိုက်ခြင်းများ တွယ်ကပ်နေမည့်အစား ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရေး နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 16 (Xinhua) — China on Monday urged the Group of Seven (G7) to stop smearing China and interfering in China’s internal affairs.
“China’s positions on issues relating to Hong Kong, Xinjiang and Taiwan, as well as maritime issues, are consistent and clear,” Zhao said, adding that China has expressed its firm opposition to the G7 presidency.
“The lengthy G7 communique is filled with preposterous allegations not even worth refuting. In total disregard of China’s solemn position and objective facts, it grossly interferes in China’s internal affairs, maliciously slanders and smears China, and once again exerts pressure on China using such pretexts as the Russia-Ukraine conflict,” Zhao said.
China urges the G7 to uphold the international system with the United Nations at its core, international order based on international law, and the basic norms of international relations based on the purposes and principles of the UN Charter, Zhao said. He called on the G7 to respect China’s sovereignty, and to cease slandering China and interfering in China’s internal affairs in any form.
“We urge the G7 to act in the interest of world peace and development, stop applying double or multiple standards, stop sending military aircraft and warships to other countries’ doorsteps to flex muscles at every turn, stop wantonly instigating color revolutions in other countries, stop arbitrarily resorting to illegal sanctions or long-arm jurisdiction, and stop fabricating and spreading lies and rumors about China,” the spokesperson said.
He also urged the G7 to assume its responsibility, fulfill its due international obligation, safeguard true multilateralism, focus on global governance, strengthen cooperation with the UN, G20 and other multilateral mechanisms, and playapositive role in addressing global challenges and promoting world economic recovery, instead of clinging to the Cold War mentality and ideological bias, pursuing “small clique” group politics, creating confrontation and division, and bringing chaos to the world. ■